Ingabe Unayo Ividiyo Yekhasi Lasekhaya? Ingabe Kufanele Wena? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 9, 2015 NgoLwesihlanu, Novemba 13, 2015 UJeremy Williams
Ngisanda kuthola i- Isimo se-Video 2015 umbiko ovela kuCrayon, isayithi elikhuluma ngalo lineqoqo eliphelele kunawo wonke lamadizayini wokumaketha kuwebhu. Umbiko wocwaningo olunamakhasi angama-50 ugxile kakhulu ekuweni okuningiliziwe okuyizinkampani ezisebenzisa ividiyo, noma ngabe zisebenzisa amapulatifomu wokusingathwa mahhala njenge-Youtube noma amapulatifomu akhokhelwayo afana nawo Wistia or Vimeo, nokuthi yiziphi izimboni okungenzeka zisebenzise ividiyo.
Yize lokho bekuthakazelisa, ingxenye ethakazelisa kakhulu yombiko yilapho beqhekeze khona ukuthi yiziphi izinkampani nezimboni ezisebenzise ithuba lokusebenzisa amavidiyo ekhasini eliyisiqalo. Ngokumangazayo, yi-16% kuphela yamawebhusayithi aphezulu we-50,000 afaka amavidiyo ekhasini labo eliyisiqalo, ngakho-ke basenendawo enkulu yokukhula.
Izimboni ezinhlanu okungenzeka zibe namavidiyo emakhasini azo okuqala yiSoftware, Marketing, Healthcare, Nonprofit, kanye neMfundo. Noma kungenzeka ukuthi babe namavidiyo emakhasini abo asekhaya, cishe ama-1 kumawebhusayithi ama-5 kulezo zimboni afaka amavidiyo asekhaya.
Phakathi kwezimboni ezinamathuba amancane okufaka amavidiyo ekhasini labo eliyisiqalo kunezimanga ezimbalwa. Bangu-14% kuphela amabhizinisi ezokuvakasha, ama-8% wezindawo zokudlela kanye nama-7% amawebhusayithi okuthengisa afaka amavidiyo ngokugqamile emakhasini abo asekhaya. Imboni Yezokuvakasha, Ukudla & Iziphuzo, kanye Nokuthengisa kufanele ube phakathi kwabaholi kuvidiyo ngenxa yalokho abakuthengisayo.
Ngayinye yalezi zimboni, amaklayenti abo angahle abe nesifiso esinamandla sokubona ukuthi batholani ngaphambi kokwenza isinqumo sokuthenga. Cabanga nje okokugcina lapho ubona ividiyo enhle yendawo yokuvakasha noma yokudlela. Ubungafuni ukuya khona ngokushesha? Ngisho nasenkampanini yethu, sibone imbuyiselo eqinile ekutshalweni kwemali kusuka ngokufaka i- ividiyo ekhasini lethu eliyisiqalo.
Njengoba sibuyekeze ividiyo yethu eyikhasi eliyisiqalo ku-12 Stars Media, sinezinkontileka eziningi ezinemifanekiso emi-5 esizivalile lapho iklayenti likhombe ngqo ividiyo yekhasi eliyisiqalo njengethonya elikhulu esinqumweni sayo. - Rocky Walls, isikhulu esiphezulu se- 12 Izinkanyezi Media.
Okuthathwe kakhulu kulo mbiko ukuthi, ngenkathi amabhizinisi eqala ukufaka amavidiyo ekhasini lawo eliyisiqalo - futhi ebona imiphumela emihle ngenxa yawo - kusekhona indawo eningi yokusebenzisa ngokunenzuzo ividiyo futhi abone umthelela ongaba nawo ezinkampanini ' imigqa engezansi.
Landa Isimo Sombiko Wevidiyo ka-2015
Tags: Ikrayoniukudla nesiphuzoividiyo yekhasi lasekhayaeliyisiqaloividiyo eyisiqaloividiyo yokuthengisaEzokuvakashaukukhangisa kwevidiyovimeoWisdomtia
UJeremy uyi-VP Marketing and Communications ku 12 Izinkanyezi Media futhi UCandidio. Banikela ngezinsizakalo zombili zevidiyo kanye nesiteji sokuzihlelela sevidiyo.